Denpasar " Journey-Assist - Ny tena mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Denpasar
Denpasar - renivohitr'i Bali
Denpasar no tanàna lehibe indrindra any Bali, izay ivon'ny fitantanan-draharaha amin'ny nosy. Izy io dia trano manodidina ny 20% amin'ny mponina Bali. Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mitsidika an'i Denpasar amin'ny alàlan'ny mandalo fotsiny, mankany amin'ny toeram-pialan-tsasatra rehetra eny an-dàlana mamaky ny renivohitr'i Bali. Tsy miorina amoron-dranomasina ity tanàna ity, ka tsy eo ny fialantsasatra amoron-dranomasina sy ny onja. Tsy misy fotodrafitrasa fizahan-tany toa izany koa.
Tsy toeram-pialantsasatra i Denpasar. Tsy misy fisarihana voajanahary izay tena malaza any Bali (riandrano, tendrombohitra, volkano, sns.).
Amin'ny ankapobeny, i Denpasar dia ahitana an'i Sanur, izay faritra fizahan-tany malaza. Na izany aza, ity farany dia lavitra ny jeografia amin'ny renivohitra Bali, noho izany dia heverina ho fialan-tsasatra manokana izy io.
Kianja Denpasar - 132,98 sq. km.
Ny mponina dia 800 eo ho eo.
Ny firafitr'ity tanàna ity dia manambatra ny fomba eropeana, java ary sinoa. Azontsika atao ny milaza fa amin'ny ankapobeny, i Denpasar dia mitovy amin'ny vohitra lehibe iray, satria ny tempoly sy ny lapa dia mifanila akaiky amin'ny zaridaina sy saha, ary tsy misy trano avo. Ny renivohitr'i Bali dia voatsangana matevina loatra. Ny trano indraindray mifanampy. Ambonin'izany, saika tsy misy trano vaovao naorina. Ka trano tranainy dia hita hatraiza hatraiza, ny ankamaroany dia mihoatra ny 100 taona.
Noho ny toetr'andro ambany, ny mari-pana amin'ny rivotra eto dia manodidina ny + 25 ... + 32 mandritra ny andro. Amin'ny alina dia mahalana izy no latsaka ny +22.
Denpasar dia mety hahaliana ny mpizahatany ho toerana manararaotra miantsena, satria ny vidin'ny entana maro eto dia ambany kokoa noho ny amin'ny toeram-pialantsasatra ao Bali, izay mavesatra loatra ny vidiny noho ny habetsahan'ny vahiny.
Denpasar (jerena avy amin'ny fiaramanidina)
Pura Jagatnatha any Denpasar
Fifamoivoizana any Denpasar
Denpasar amin'ny sarintany
Nandalo an'i Denpasar indroa izahay. Tsy dia betsaka ny milaza momba izany, afa-tsy ny mazava kokoa fa madio kokoa noho ny renivohitr'i Sri Lanka - Colombo.